Legal Dept – Page2– CTUM
Labour law training Gold world hotel Ta kaung word, sagaing tsp CTUM အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ် တိုင်းအလုပ်သမားများအား အလုပ်သမားဥပဒေသင်တန်း ပို့ချ သြဂုတ်လ ၁၁/၁၂ စကိုင်းမြို့ တကောင်းရပ်ကွက် စကိုင်းမြို့ တွင်ရှိသော ရွေကမ္ဘာဟော်တယ်တွင်သင်တန်းကို (၂)ရက်တာပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည် အလုပ်သမားဥပဒေသင်တန်း သို့ […]
Labour law training. Solidarity hall. CTUM East dagon. CTUM အဖွဲ့ဝင်များကိုအလုပ်သမားဥပဒေ သင်တန်းပို့ချ သြဂုတ်လ ၄ရက် ရန်ကုန် အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ CTUM သွေးစည်းညီညွတ်ရေးစင်တာတွင် သင်တန်းကို (၂)ရက်တာပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည် အလုပ်သမားဥပဒေသင်တန်း သို့ IWFM. BWFM.AFFM.TUF .EWFM.အလုပ်သမားအဖွဲ့ချူပ်များမှအလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်(၂၃)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြသည် သင်တန်း ဆရာဖြစ် […]
Published by ctum at April 5, 2018
အလုပ်သမားဥပဒေသင်တန်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၅) ရက် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်၏ (LO/FTF Council- Danish Trade Union Council for International Development Cooperation) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (CTUM) တို့မှ ပူးပေါင်း၍ CTUM […]
Published by ctum at April 2, 2018
1951 Leave and Holiday Act Training
One Day Follow Up Activities by TTM Participants 1951 Leave and Holiday Act Training ၁၉၅၁ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်ဥပဒေသင်တန်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၅) ရက် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်၏ (LO/FTF […]